Days Hotel by Wyndham wuxuu yimaadaa New Zealand
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Days Hotel by Wyndham wuxuu yimaadaa New Zealand
Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Warka Safarka Safarka
Days Inn by Wyndham wuxuu yimid New Zealand iyadoo laga furay hudheel cusub oo taariikhi ah, Days Hotel & Suites oo uu sameeyay Wyndham Hamilton.
Dheeraadku wuxuu xoojinayaa joogitaanka Shirkadda ee New Zealand iyo Hamilton, oo ah magaalada afraad ee ugu dadka badan gobolka iyo suuqa kobaca muhiimka ah. Laga soo bilaabo Abriil 1, 2018, Wyndham wuxuu furay 34 wadar hudheelo oo ku yaal Koonfurta Bari Aasiya iyo gobolka Baasifigga Baasifig, saddex ka mid ahi waxay wataan calanka Maalmaha Inn. Caalamku, sumaddu waxay leedahay in ka badan 1,700 hudheelo ku kala baahsan 25 dal.
Huteel casri ah oo laga dhisay dhisme taariikhi ah qarnigii 19-aad oo ku yaal geeska Hamilton's Collingwood iyo Victoria jidadka, Days Hotel & Suites ee Wyndham Hamilton waxaa iska leh Giarn Family Trust oo hadda ku socota dib u habeyn balaaran oo lagu soo bandhigayo bar cusub oo ay ku kulmaan, makhaayad iyo goobta soo dhawaynta.
"Maalmaha Inn by Wyndham waa mid ka mid ah magacyada hudheellada ugu caansan adduunka ee keenaya soo dhaweyn diiran, casuumaad iyo martiqaad lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay dadka safarka ah ee maalin walba socda," ayuu yiri Joon Aun Ooi, madaxweynaha iyo agaasimaha maamulka, Wyndham Hotels & Resorts, South East Asia iyo Pacific Rim . “Ku soo dhaweynta Maalmaha Hoteelka & Suites ee Wyndham Hamilton magaaladan muhiimka ah ee Jasiiradda Waqooyiga, oo ah aag ay summaddu ku tartami doonto qaybta hudheelka dhex-dhexaadka ah, waxay astaan ​​weyn u tahay istiraatiijiyadda ballaadhinta adduunka.
Wuxuu intaas ku daray, “Hamilton waa goob ganacsi oo aasaasi ah, laakiin waxaa jira xaddidan noocyo hudheello heer caalami ah oo ku yaal Bartamaha Ganacsiga si ay u taageeraan ballaarinta ganacsiga magaalada iyo horumarinta tiyaatarka. Giarn Family Trust waa lammaane aad u fiican waxaana rajeyneynaa inaan sare u qaadno deeqaha hoyga ee Hamilton iyada oo lagu kordhinayo tan ugu dambeysa. ”
Markii hore loo yiqiin Sudima Hamilton Hotel, dhisme soo jiray ilaa 1876, iminkana Days Hotel & Suites ee Wyndham Hamilton waxay bixisaa 69 qolal marti ah iyo qolal leh waxyaabo badan oo kala duwan, oo ay ka mid yihiin Wi-Fi, is-xakamaynta hawo qaboojinta iyo kululaynta , telefishannada shaashadda fidiya, iyo waxyaabaha musqusha u habboon deegaanka. Intaa waxaa sii dheer, istuudiyaha iyo labada qol ee jiifka ah waxaa lagu rakibay balakoonno qalabaysan, oo u oggolaanaya martida inay ku soo jiitaan indhaha iyo dhawaaqyada mashquulka badan ee Victoria Street. Hoteelka sidoo kale waxaa ku yaal goobo lagu kulmo oo gaar loo leeyahay, qolka nasashada, meelaha dharka lagu dhaqdo ee martida iyo gawaarida la dhigto
Iyada oo ku taal bartamaha magaalada, martidu waa talaabooyin ka socda Matxafka Waikato iyo SKYCITY Hamilton, halka Claudelands Park iyo xarunta shirarka ee magaalada ay ku jiraan masaafo gaaban oo wadista gawaarida ah. Soo-booqdeyaashu waxay sidoo kale ku raaxeysan karaan socod tamashleyn ah iyagoo dhex maraya jardiinooyinka Hamilton, ku qaban karaan ciyaarta cricket-ka garoonka Seddon Park, waxay ku daawan karaan rugby-ga garoonka FMG Stadium Waikato, waxay ku soo bandhigi karaan riwaayadda The Meteor Theater ama waxay ku booqan karaan xayawaanka Hamilton Zoo.
Maalmaha Inn ee Wyndham waxay ka caawineysaa martida inay qabsadaan maalmaha, meel kasta oo ay ku qaataan. Marka lagu daro Days Inn ee Wyndham magaca, astaanta sidoo kale waxay xuquuqo magacyada Days Hotel ee Wyndham iyo Days Hotel & Suites ee Wyndham, iyo kuwo kale. Guud ahaan New Zealand, Wyndham hadda waxay ka hawlgashaa wadar ahaan toban hudheelo iyo goobo dalxiis oo dhowr meelood oo muhiim ah, oo ay ku jiraan Auckland, Queenstown, Wanaka, Christchurch, Rotorua iyo Taipa. Days Inn ee Wyndham wuxuu noqonayaa sumcadda saddexaad ee shirkaddu ku leedahay dalka, ka dib Ramada® ee Wyndham iyo Wyndham Garden®.
Maalmaha Inn ee hudheelada Wyndham waxay ka qayb galaan Wyndham Rewards®, oo ah barnaamijka abaalmarinta ugu deeqda badan adduunka oo leh in ka badan 30,000 hudheello, dalxiisyo naadi lagu dalxiis tago iyo kiro fasax oo adduunka oo dhan laga helo. Loogu talagalay loogu talagay socotada maalinlaha ah, xubnuhu waxay kasbadaan 1,000 dhibic oo la damaanad qaadayo joogitaan kasta oo u qalma waxaana laga yaabaa inay ku soo furtaan dhibco abaalmarino kala duwan, oo ay ku jiraan habeeno bilaash ah, kaararka hadiyadaha, baayacmushtariga iyo waxyaabo kaloo badan.